I-manicure yaseFrance ekhaya ngezipikili ezimfushane | Bezzia
USusana godoy | 11/10/2021 10:00 | Ubuhle
Ukukwazi ukwenza umuthi wethu ekhaya ngaso sonke isikhathi kuwumqondo omuhle. Ngoba kungale ndlela kuphela lapho singalungisa khona izinzipho zethu noma kunini lapho sifuna khona. Kepha uma ufuna ukwazi ukuthi ungayenza kanjani ifayili le- I-manicure yaseFrance ekhaya ngezipikili ezimfushane, lapho-ke udinga ukulandela izinyathelo ezimbalwa ezilula.
Uzobona ukuthi ngekhono elincane ungahlala uthola konke okufunayo. Okokuqala, kuzofanele wenze ifayili le- ukukhethwa kwezinto ezinhle kakhulu noma imikhiqizo futhi ukusuka lapho, ungaqala ngomsebenzi wakho ozoba mnandi kakhulu futhi usheshe. Ngabe kufanele sifinyelele kukho?
1 Hlanza izinzipho zakho ngaphambi kokuba uqale
2 Sika izinzipho zakho kahle bese usebenzisa ifayili
3 Njalo unakekele ama-cuticles akho
4 Isisekelo sokuvikela sokwenza umuthi waseFrance ekhaya ngezipikili ezimfushane
5 Koqweqwe lwawo koqweqwe lwawo
6 Imihlahlandlela emihle yokwenza manicure
Hlanza izinzipho zakho ngaphambi kokuba uqale
Ukuhlanza kuhlala kungenye yezinyathelo okufanele sizicabangele ngaphambi kokuqala noma yimuphi umsebenzi wobuhle. Ngakho-ke, izipikili zazingazukushiywa ngemuva. Uma unama-enamel asele, usuvele uyazi ukuthi kungcono ukuwasusa ngesikhiphi se-nail polish futhi uma kungenjalo, ungahlala ufaka ujusi kalamula omncane ukuze ukwazi ukushiya amabala athile. Khumbula ukuthi ukubhucungwa ngezandla ngamaconsi ambalwa kawoyela kuzoqeda zonke izinhlobo zokoma futhi umphumela uzoba ngcono kakhulu.
Sika izinzipho zakho kahle bese usebenzisa ifayili
Ukuze wenze i-manicure yesiFulentshi ekhaya ngezipikili ezimfushane, kudingeka sizinqume. Ngoba isiphetho sizoba nenhle njengakwezinzipho ezinde futhi-ke zizokunikeza umphumela olula ongawugqoka nsuku zonke, ngaphandle kokuthi ube okhethekile. Ngakho-ke, ungashiya womabili amamilimitha ambalwa wesipikili bese unginika umumo owufunayo nefayela. Ungakhetha ukuphela kwesikwele noma okuyindilinga, ngokuya ngezidingo zakho. Khumbula ukuthi indlela yokuwafaka ihlale ingcono ngaphakathi ngaphakathi.
Njalo unakekele ama-cuticles akho
Lokho kokuzisika kungemva kwethu, ngoba singenza isinyathelo esilula kakhulu nangenduku yesihlahla se-orange noma ithuluzi elikhethekile lale ndawo, okuzoba yi-cuticle remover. Khumbula ukuthi ngaphambi kokuthatha isinqumo, into enhle kunazo zonke ukuthi zithambise kancane futhi ungakwenza futhi ngethonsi lamafutha omnqumo. Lokhu kuzokwenza indawo ithambe futhi kwenze kube lula ukusebenzisana nayo. Siyicindezela emuva kancane futhi umphumela uzoba njengoba ufisa.
Isisekelo sokuvikela sokwenza umuthi waseFrance ekhaya ngezipikili ezimfushane
Lapho izinzipho sezilungisiwe, sekuyisikhathi sokuzivikela ngaphambi kokupholisha uqobo. Ngakho-ke, kufanele ngaso sonke isikhathi sibe nesisekelo esivikelayo. Ngayo sizonakekela isipikili, sizosinika i-hydration edingekayo futhi ngasikhathi sinye senza imibala yama-enamel esikhathi esizayo ibukeke ithuthukisiwe futhi na ngaphezulu. Ingesinye sezinyathelo ezibalulekile, ngoba ngaleyo ndlela sizobavimba ukuthi bangaphuzi. Yize khumbula ukuthi ungenzi imidwebo kaningi, kepha kufanele uvumele izipikili nazo ziphefumule izinsuku ezimbalwa.
Koqweqwe lwawo koqweqwe lwawo
Ngemuva kokuvikela izinzipho zethu, akukho okufana nokufaka ijazi lokuqala le-base polish. Kulokhu, ungakhetha ungqimba loqweqwe olubonakalayo noma owodwa onomphetho okhanyayo opinki noma onqunu. Lokhu kuzoyinika umbala omncane ozoqhakambisa ne-manicure uqobo. Lapho isendlalelo sokuqala soma, ungasinika owesibili ukuze ekugcineni i-manicure yethu ibe nokumelana okwengeziwe.
Imihlahlandlela emihle yokwenza manicure
Lapho ubude besipikili bungaphezu kokusobala, kuyiqiniso ukuthi singakhetha ukufaka koqweqwe lwawo ngqo ngebhulashi. Vele, inqobo nje uma unekhono noma umkhuba. Kepha uma ukhetha ukuyidlala iphephile, akukho okufana nokubheja kweminye imihlahlandlela noma izitika zalo msebenzi. Ukuthi zizacile impela ukuze zaziwe kepha zincane nje. Kuzoba nesisekelo esihle kakhulu se-manicure yethu. Sizowabeka ngasekugcineni, sizopenda ngoqweqwe lwawo olumhlophe bese sisusa lapho zonke izingxenye sezivele zomile. Manje khanya kancane bese ubakhombisa!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » I-manicure yaseFrance ekhaya ngezipikili ezimfushane
Amathiphu awusizo wokufihla impandla okufanele ukwazi